Arsivan'ny AFRICAN CUISINE - Afrikhepri Fondation
Jereo ny hevitra am-boalohany momba ny kamiaobe fisakafoanana afrikanina ao Paris ihany. Black Spoon dia noforonin'i Fati Niang ary manamboatra ny sakafo eny an-dalambe. Ity no filokana sahy ...
Iza i Oumou Bah? Fa maninona ianao no nanoratra ny boky "nahandro afrikanina"? Oumou Bah: Gineana monina any Thailand aho. Ny fitiavako nahandro no nanosika ahy ...
Ahoana no hanomanana ny Soupou Kandja?
Anarana: Soupou Kandja Fiandohana: Mali, Senegal Karazan-tsakafo: hena Akora ilaina: Menaka palmie, hena. Isan'ny olona: 4 fanomanana: 30 mn fandrahoana sakafo: 90 mn akora 300 g henan'omby tapahina ao ...